Fankalazana ny faha-100 taona nijoroan'ny Antenimieran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo | Primature
10 décembre 2020 30 mars 2021
Mahazoarivo, 10 desambra 2020 – Tonga nanome vononahitra sy nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny lanonam-pakalazana ny faha-100 taona nijoroan’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo, sy ny fanolorana mari-boninahitra ho an’ireo mpikambana mandrafitra ny antenimiera ny Praiminisitra, Lehiben’ny governementa, Ntsay Christian.
Vina napetraky ny Filohan’ny Repoblika hampandrosoana ny firenena ny fametrahana ho laharam-pahamehana ny indostria. Raha mbola 80% amin’ny filàn’ny mponina amin’ny andavan’andro no entana afarana dia fanamby ho an’ny fitondram-panjakana ny hananganana indostria Malagasy afaka manodina ireo akora fototra misy eto an-toerana.
Mba hahatongavana amin’izany tanjona iombonana izany anefa dia ilaina ny fifamenoana sy ny fifanampiana eo amin’ny fitondram-panjakana sy ny mpandraharaha, ary homen-danja kokoa ny mpandraharaha Malagasy ho reharehan’ny firenena.
Nankasitraka ireo ezaka nataon’ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatra tsy miankina nandritra izay fotoana izay ny fitondram-panjakana nandritra izao lanonana izao, ary teo am-pamaranana dia nilaza ny Lehiben’ny governemanta fa « tsy mora ny manangana orinasa, ary tsy mora ny mitantana orinasa ka mamporisika sy makahery anareo rehetra misehatra sy mampirindra ny asa eto anivon’ny Antenimieran’ny varotra ny fitondram-panjakana ».
← Conseil du gouvernement du Mercredi 09 Décembre 2020
Fanomezana ho an’ny CCO-K →